पेटमा बोसो लागेर तनाव हुनुहुन्छ ? दैनिक खानुहाेस् यी ५ घरेलु खानेकुरा - HelloKhabar
पेटमा बोसो लागेर तनाव हुनुहुन्छ ? दैनिक खानुहाेस् यी ५ घरेलु खानेकुरा
२०७७ फाल्गुन १२, बुधबार १९:३१
काँक्रो; बेलुकाको खाना खानुभन्दा पहिले काँक्रोको जुस वा सलाद खानुहोस् । यो पेटका लागि धेरै लाभदायी छ । यो सेवनका कारण धेरै खाना खानबाट जोगिन सकिन्छ नै, यसले पेटको झाडुको काम पनि गर्छ । जसले गर्दा बिस्तारै बोसो कम हुन्छ ।
धनियाँको जुस; यसमा क्यालोरी निकै कम पाइनछ भने एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा धेरै हुन्छ । यसको प्रयोगबाट अरु कुनै समस्या आउँदैन । यसले किड्नी ठिक राख्न समेत सघाउँछ।
एलोभेरा जुस; एलोभेरा जुस धेरै बिरामका लागि उपयोगी ठानिन्छ । दिनमा एक कप यसको जुस पिउँदा पेटको बोसो कम हुन्छ। यसले कोलेस्ट्रोलको समस्या पनि घटाउँछ।
ग्रिन टी; ग्रिन टीमा एन्टिएक्सिडेन्ट्स हुन्छ । पेटको बोसो घटाउन भने विना चिनीको ग्रिन टी पिउँदा फाइदा हुन्छ । यसले शरीरमा रहेका विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न पनि सघाउँछ । त्यसैगरी कागती मिसाएर खाँदा टक्सिनबाट पनि छुट्कारा मिल्छ।
अदुवाको रस; प्रतिदिन एक चम्चा अदुवाको रस पेट कम गर्नका लागि धेरै सहयोगी हुन सक्छ । यसले शरीरको बोसो समेत बर्न गर्न सघाउँछ।
मुख्य समाचार हेलाेखबर - २०७७ फाल्गुन १२, बुधबार १९:३१
आर्थिक २०७७ फाल्गुन १२, बुधबार १९:३१
मुख्य समाचार २०७७ फाल्गुन १२, बुधबार १९:३१
ब्यानर २०७७ फाल्गुन १२, बुधबार १९:३१